ကုန်ကြမ်း LCZ696 အမှုန့် (936623-90-4) hplc≥98% | AASraw R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / LCZ696 အမှုန့် (936623-90-4)
SKU: 936623-90-4. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ LCZ696 မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (936623-90-4) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) တစ်ဦး neprilysin inhibitor နှင့် angiotensin အဲဒီ receptor blocker (ARB) ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ angiotensin အဲဒီ receptor-neprilysin inhibitors (ARNIs) လို့ခေါ်တဲ့အေးဂျင့်တစ်ဦးအသစ်များကိုလူတန်းစားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ LCZ696 အမှုန့်သည်လက်ရှိတွင်တစ်ခု angiotensin converting အင်ဇိုင်း (ACE အား) ၏အရပျ၌လျှော့ထွတ်အစိတ်အပိုင်း (HFrEF) နဲ့နှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူလူနာကုသမှုအတွက် inhibitor သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်း ARB ညွှန်ပြနေသည်။ LCZ696 အမှုန့်များအတွက်ကုန်သွယ်မှုနာမကိုအမှီ Entresto ဖြစ်ပါတယ်။
LCZ696 အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: LCZ696 အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 137-140 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
နှလုံးသွေးကြောသေခံခြင်းနှင့်နှလုံးအစွန့်စားမှုလျော့ကျလာအတွက် LCZ696 အမှုန့်
LCZ696 အမှုန့်, sacubitril အမှုန့်, valsartan, LCZ 696, LCZ696
ကုန်ကြမ်း LCZ696 အမှုန့်အသုံးပြုမှု
LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) တစ်ဦး neprilysin inhibitor နှင့် angiotensin အဲဒီ receptor blocker (ARB) ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ angiotensin အဲဒီ receptor-neprilysin inhibitors (ARNIs) လို့ခေါ်တဲ့အေးဂျင့်တစ်ဦးအသစ်များကိုလူတန်းစားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ LCZ696 အမှုန့်သည်လက်ရှိတွင်တစ်ခု angiotensin converting အင်ဇိုင်း (ACE အား) ၏အရပျ၌လျှော့ထွတ်အစိတ်အပိုင်း (HFrEF) နဲ့နှလုံးပျက်ကွက်နှင့်အတူလူနာကုသမှုအတွက် inhibitor သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်း ARB ညွှန်ပြနေသည်။ LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) နာတာရှည်နှလုံးပျက်ကွက်, NYHA လူတန်းစား II ကို-IV နှင့်လျှော့ချထွတ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူလူနာနှလုံးပျက်ကွက်မှုအတွက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများနှင့်ဆေးရုံတင်ကုသရန်ထံမှသေမင်း၏အန္တရာယ်လျှော့ချရန်ဇူလိုင်လ 2015 အတွက် FDA ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ neprilysin တားစီးနှင့် renin-angiotensin aldosterone စနစ်၏ပေါင်းစပ် (RAAS) သက်ရောက်မှုတစ်ခု ACE အား inhibitor ၏သူတို့အားသာလွန်ဖြစ်ပြပြီ။ LCZ696 အမှုန့်များအတွက်ကုန်သွယ်မှုနာမကိုအမှီ Entresto ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစံစတင်ထိုး 49 / 51 နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ် mg ဖြစ်ပါတယ်။
696 / 24 နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ် MG LCZ26 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ၏တစ်ဦးကလျှော့ချကနဦးဆေးထိုးအောက်ပါလူနာတွေအတွက်အကြံပြုသည်:
• ACE အားတားသို့မဟုတ် ARB နုံ
•အနိမျ့ထိုး ACE အား inhibitor သို့မဟုတ် ARB ကုထုံး: အနိမ့်ထိုး ACE အား inhibitor ညီမျှ: valsartan <= 10mg နေ့စဉ်: enalapril <= 160 နေ့စဉ်အနိမ့်ထိုး ARB ညီမျှ MG
•ပြင်းထန်သောကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကို (GFR <30ml / မိနစ် / 1.73m 2)
•အလယ်အလတ် Hepatic ချို့ယွင်း (ကလေး-Pugh လူတန်းစားခ)
ကုန်ကြမ်း LCZ696 အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) NYHA လူတန်းစား II ကို-IV, နာတာရှည် HFrEF နှင့်အတူလူနာနှလုံးပျက်ကွက်မှုအတွက်နှလုံးသွေးကြောသေခံခြင်းနှင့်နှလုံးပျက်ကွက်ဆေးရုံတင်၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ချဖို့ညွှန်ပြနေသည်။ LCZ696 ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) တစ်ဦး ACE အား inhibitor သို့မဟုတ် ARB ၏အရပျ၌ကအခြား GDMTs နှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများကိုမဆိုရန် Hypersensitivity •။
• ACE အား inhibitor ၏ Concomitant အသုံးပြုမှု: LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) တစ်ဦး ACE အား inhibitor ကိုလက်ခံရရှိ၏ 36 နာရီအတွင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်မရသင့်ပါတယ်။
•များတွင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် aliskiren ၏ Concomitant အသုံးပြုခြင်း။
• ACE အား inhibitor သို့မဟုတ် ARB ကုထုံးနှင့်အတူယခင်ကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်သော angioedema ၏သမိုင်း။
(1) သန္ဓေသားအဆိပ်အတောက်: ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ပေးသောအခါ RAAS အပေါ်အလုပ်လုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသန္ဓေသားမှအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကကိုယ်ဝန်၏ဒုတိယနှင့်တတိယသုံးလပတ်အတွင်းသန္ဓေသားကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုလျော့ချခြင်းနှင့်သန္ဓေသားနှင့်မွေးကင်းစကလေးများရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်တွေ့ရှိလျှင် LCZ696 ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ရပ်စဲရပါမည်။
(2) Angioedema: Angioedema Paradigm-HF အတွက်ကို double-မျက်စိကန်းသောကာလအတွင်း enalapril နှင့်အတူ LZC0.5 (sacubitril / valsartan အမှုန့်) နှင့် 696% နှင့်အတူ 0.2% အဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ တစ်ခုတိုးလာမှုနှုန်းသည် non-လူမည်းတွေ vs. လူမည်းတွေနှင့် angioedema ၏ကြိုတင်သမိုင်းနှင့်အတူသူတို့အားလည်းရှိခဲ့သည်။ angioedema ဖြစ်ပေါ်ပါက, LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ရပ်စဲထားရမည်နှင့် rechallenged ခံရမသငျ့သညျ။ LCZ696 ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ယခင် ACE အား inhibitor သို့မဟုတ် ARB ကုထုံးနှင့်ပတ်သက်သော angioedema တစ်သမိုင်းနှင့်အတူရှိသူများအတွက်မသုံးသင့်ပေ။ တစ်ဦး ACE အား inhibitor မှသို့မဟုတ် switching လျှင်, 36 နာရီ washout ကာလမူးယစ်ဆေးအကြားလိုအပ်ပါသည်။
(3) Hypotension: LCZ696 ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ကို RAAS ၎င်း၏တားစီးမှတဆင့်သွေးဖိအားကိုလျော့နည်းစေတယ်လေနှင့်လက်ခဏာ hypotension ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Paradigm-HF ၏ကို double-မျက်စိကန်းသောကာလ၌, LCZ18 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပေါ်လူနာ 696% (sacubitril / valsartan အမှုန့်) enalapril အပေါ်လူနာအပေါ် 12% vs. hypotension တစ်ခုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦး activated RAAS ရှိသူများလူနာတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်လည်းမရှိကတည်းကကြောင့်ကြိုတင်စတင်နိုင်ဖို့ဆားသို့မဟုတ်အသံအတိုးအကျယ်တွေပျက်စီးမှုပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။ လက်ခဏာ hypotension ဖြစ်ပေါ်ပါက, Diuretics ဆီးနှင့်အခြား antihypertensives ညှိနှင့် hypovolemia ၏အခြားအကြောင်းတရားများဆက်ဆံပါနှင့် / သို့မဟုတ် LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ၏ဆေးထိုးလျှော့ချပေးပါတယ်။ လက်ခဏာ hypotension LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) တွင်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းကြားမှဆက်ရှိနေသေးလျှင်, မူးယစ်ဆေးရပ်တန့်ဖို့လိုလိမ့်မည်။
(4) ချို့တဲ့ခြင်းကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကို: LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) တစ်ဦး RAAS ပိတ်ဆို့ခြင်းအေးဂျင့်လျက်ရှိ၏ ထို့ကွောငျ့, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်လျော့ကျကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသွေးကြော stenosis ရှိသူများအပါအဝင်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မျှော်မှန်းထားနိုင်ပါသည်။ Paradigm-HF, LCZ5 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နဲ့ကုသသူတို့၏အမျိုးအ 696% (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ၏ကို double-မျက်စိကန်းသောကာလ၌၎င်း, enalapril တစ်ခုဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်အဖြစ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရှုံးနိမ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, SCR အတွက်တိုးမြှင့်> = 50% LCZ16 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) နှင့် enalapril နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူကုသသူတို့၏အမျိုးအ 696% အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျောက်ကပ် function ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရပါမည်နှင့် LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) ထိုးလျော့နည်းသွားသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ function ကိုအတွက်ဆေးခန်းသိသိသာသာလျှောက်လျော့နည်းဘို့ရပ်တန့်ရပါမည်။
(5) Hyperkalemia: RAAS ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့် LCZ696 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) hyperkalemia ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ Paradigm-HF ၏ကို double-မျက်စိကန်းသောကာလ၌, LCZ12 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နဲ့ကုသလူနာ 696% (sacubitril / valsartan အမှုန့်) hyperkalemia တစ်ခုဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှု> 5.5 mEq / L ကို LCZ16 အမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) နှင့် enalapril နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူကုသသူတို့၏အမျိုးအ 696% အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အနီးကပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချွတ်ယွင်း, များတွင်ဆီးချိုရောဂါ, hypoaldosteronism, ဒါမှမဟုတ်မြင့်မားတဲ့ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်စာအဖြစ်စွန့်စားမှုအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူလူနာအတွက်အကြံပြုသည်။ ထိုးလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများပြတ်တောက်ပိုတက်စီယမ်အတွက်ဆေးခန်းသိသိသာသာတိုးဘို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
လူနာအဆင့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောမျက်စိကန်းပြေးစဉ်အတွင်း enalapril နှင့် LCZ696 ကုန်ကြမ်းအမှုန့် (sacubitril / valsartan အမှုန့်) နှစ်ဦးစလုံးသည်းခံနိုင်လိမ့်ရန်လိုအပ်သည်ခဲ့ကြသည်ရသော Paradigm-HF ၏တရားခွင်ဒီဇိုင်းကိုအခြေခံပြီးဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအောက်မှာ-အစီရင်ခံတင်ပြကြသည်ဖွယ်ရှိသည် နှင့်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်ပိုများနိုင်ပါသည်။
LCZ696 အမှုန့်မခွဲခြားဘဲဆီးဆိုဒီယမ်မစင်နဲ့စာနာလှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးမြှင်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည့်ဆားစားသုံးမှု၏ဒီဂရီ၏ SHR အတွက် valsartan ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကို BP လျှော့ချရေးစေ၏။ ထို့အပွငျ LCZ696 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချထို့အပြင်ကို BP သွေးတိုးရောဂါကြွက်များပိုမိုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှဦးဆောင်။
LCZ696 ကုန်ကြမ်း Powder
AASraw ထံမှ LCZ696 အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
LCZ696 ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း